Sam Mendes 1917kii
Ku rakibay Mechanized
Cinji Silent Roof
Macbadka Sky One
Sssh! Filim Horumar leh
Sam Mendes Dagaalkii Dunida 1 Riwaayad '1917'
Silent Roof Farsamaynta Qalabka
Cusboonaysiinta Sam Mendes - 1917
Macbadka - Sky One Production
Warshadaha Filimada & Silent Roof
Dhawaqa roobka ka imanaya saqafkaaga istuudiyaha ma dhibbaa?
Muuqaalka roobku ma hakiyaa jadwalkaaga toogashada?
Silent Roof wuxuu jawaab u yahay dhibaatadaada.
Qalabka Silent Dufan ee ku rakiban dusha sare ee saqafka ayaa joojinaya carqaladeynta buuqa roobka.
Fadlan calaamadee Blog-gii maadaama si joogto ah loo cusbooneysiiyay.
Sssh! Duubista Filimka
Waxaa lasoo dhejiyay 23 Sebtember 2018
Dhismihii hore ee 'Monster Building' ee ku yaal Southall, Ealing, London, waxaa la siiyay heshiis kiro oo nolosha ah oo ay ugu mahadcelinayaan warshadaha filimka Ingiriiska iyo tikniyoolajiyada dhimista codka Silent Roof.
Goobta warshadda, oo soo saartay dalagyada ay ka mid yihiin caanka ah 'Honey Monster' Sugar Puffs illaa 2016, ayaa la diidey illaa iyo markii ay dhowaan soo saartey shirkadda 'scout', Goobta Wadajirka ah. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo aan ku raaxeysanay xagaagii ugu fiicnaa sannado badan, Goobta Wadajirka waxay ogtahay in buuqa roobka ee ay soo saartey cimilada caadiga ah ee Ingiriiska uusan si wanaagsan ugu dhex laaban karin goosgoosyada filimka saqafka birta leh, maaddaama xilliga qaboobaha uu culeys qaali ku yahay miisaaniyadooda. Waxay raadinta internetka ka raadinayaan dhibaatadooda, waxay heleen sheyga kaliya ee banaanka ah ee rakibay kaasoo si weyn hoos ugu dhigaya buuqa roobka, ka hor intaanu ku dhufan saqafka birta. Waxay codsadeen caawinta Silent Roof Ltd, oo fulisay rakibaadda saqafka mitirka laba jibbaaran ee 5,400 mitir laba jibaaran. Rakibaadda ayaa hadda la dhammaystiray oo Dhismaha Monster-ka ayaa hadda loo beddelay filim duug ah oo halkaa lagu diyaarinaayo wax-soo-saarid aan caadi ahayn Tan waxaa telefishanka laga sii dayn doonaa goor dambe oo loo maro Sky Atlantic.
Waxaa lasoo dhejiyay 10 Febraayo 2019
Riwaayadda cusub ee 'Sam Mendes' Dagaalkii Dunida I '' 1917 'oo ay soo saareyso Sheekooyinka Waxqabadka ayaa hadda u xilsaaray Silent Roof Ltd inuu bixiyo tikniyoolajiyada dhimista Roobka Rugta goobta filimka la magacaabay.
Nidaamka Silent Roof wuxuu ka ilaalin doonaa dhismaha su'aal ka taagan tahay mashquulka buuqa roobka ka yimaada saqafka iyo darbiyada dhismaha. Mendes, oo ku guuleystay sagaal abaalmarino Akadeemiyadeed oo loogu talagalay filimada oo ay ku jiraan American Beauty, Skyfall, iyo Specter, ayaa xaqiijiyay ku lug lahaanshahooda filimka Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, 1917, kaasoo bilaabi doona inuu duubo guga 2019 oo ujeedadiisu tahay Diseembar 2019 taariikhda la sii daayo.
Waxaa lasoo dhejiyay 24 Maarso 2019
Aamusnaanta Silent Roof wuxuu farsameeyay rakibaadda xafiisyada Air Techniques International ee UK.
Ka faa'ideysiga adeegsadeyaashayada at Dabaqa Filimka si loo siiyo shaqaalaha, saqafka oo dhan ayaa daboolay maalin keliya.
Joojinta dhawaaqa roobka ayaa hadda ah wax la soo dhaafay oo looga mahadcelinayo Silent Roof.
Waxaa lasoo dhejiyay 6 Abriil 2019
Silent Roof Ltd waxay u isticmaashaa qaabab rakiban farsamo si ay ugu rakibto Teknolojiyadda Yaraynta Silent Roof Rise ilaa labo baakood. Bandhig Filim ayaa laga dhisi doonaa maqsinka iyadoo qayb ka ah soosaarka cusub ee Sam Mendes '1917'
Soosaaradan qaaliga ah, Silent Roof waxaa loo magacaabay inuu xalliyo buuqa roobka badan ee roobka soo saaray ee saqafka saqafka birta ee astaanta u ah. Xaaladdan oo kale, saqafka iyo darbiyada labaduba waxay ku dabooleen Qalabka Silent Roof Matri oo ka ilaalinaya filimka 'Set Set' carqaladeynta buuqa roobka.
Dhageysiga waa Aamin
Fiidiyowga dhanka midig wuxuu muujinayaa soo bandhigid Silent Roof hore ee alaabteena gaarka ah. Mantra-gayagu wuxuu sii ahaanayaa sidiisii ​​oo kale markii uu ahaa horaantii 2000s ... Dhageysiga waa Aamin
Guji batoonka ciyaarta oo hubi in mugga qalabkaaga uu soo baxay.
Waqtigaan (2007), nooca Silent Roof Material (SRM) wuxuu ahaa nooca translucent, asal ahaan cad oo midab ah. Tan waxaa looga adeegsaday saqafka guryaha ee Boqortooyada Midowday oo dhan. Silent Roof Ltd hadda waxay xooga saartaa inay tahay waxqabadka qaybta ganacsiga halkaas oo loo adeegsado nooc madow oo ah SRM.
Haddii aad leedahay dhibaato sanqadha roobka ee la xidhiidha qaab dhismeedka saqafka dusha sare, nala soo xiriir (bogga hoose) ee Silent Roof, waxaan u haynaa xallinta dhibaatadaada.
Cusboonaysiinta Sam Mendes Production 1917
Waxaa lasoo dhejiyay 8 Agoosto 2019
Silent Roof Ltd waxaa loo magacaabay inay bixiso tikniyoolajiyadeeda dhimista Roobka Rugta goobta filimka ee Dagaalkii Koowaad ee Adduunka '1917'. Duubista filimka ee labada dhisme ee la ilaaliyay ayaa la soo gabagabeeyey gugii dabayaaqadii 2019.
George MacKay iyo Cayaaryahankii Dean-Charles Chapman ee XulkaXeedka iyadoo labo ka mid ah askarta Ingriiska ay u xilsaarnaayeen inay u gudbaan dhul cadow ah si ay u gaarsiiyaan farriin ay u badan tahay inay joojinayaan gawraca boqolaal askar ah, oo midkood uu walaal u yahay dabeecadda Chapman, Blake. Dhinacyada ay wadajiraan MacKay iyo Chapman ee filimka kujira waa Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, Andrew Scott, Mark Strong, Teresa Mahoney, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Justin Edwards, Gerran Howell, Anson Boon, iyo Richard McCabe.
1917 waxaa laga bilaabay dalka Mareykanka Disembar 25, kahor intaan loo sii deyn adduunka oo dhan Janaayo 10, 2020.
Silent Roof wuxuu ku gudajiraa soosaarista horjooge kale filimka filimka loogu talagalay rakibo kale oo sharaf leh, waqti dambe.
Silent Roof - Ka shaqeynta gudaha
asalka oo ku saabsan Soosaarka Sky One
La daabacay 23 Sebtember 2019
Qalabka Silent Roof (SRM), wuxuu yareeyaa buuqa roobka si uu uga dhawaajiyo filimka 'Temple' ee Sky Original ee Sky One. Bishii Sebtembar 2018 goobtii filimka ee loo yaqaan 'Monster' dhismaha ee Southall London, waxaa loo wareejiyay filimaanta filimka 'Sky' ee la qabsiga telefishanka Noorway ee Valkyrien, kaasoo markii ugu horreysay hawada laga sii daayay sanadkii 2017. Waa xiddigihii Mark xoogga, Carice Van Houten, iyo Daniel Mays waxaana loo xilsaaray 23ka Agoosto 2018. Saqafka dhismaha halkaas oo taxanaha qaarkood lagu toogtay, waxaa gebi ahaanba daboolay SRM oo ka ilaalinaysa duubista codka soosaarka ka imanaya jabaqda roobka iyo cawaaqibta ka dhalanaysa dib-u-qaadashada.
Daniel Milton (Mark Strong) waa dhakhtar qalliin oo, kaxeeya masiibo shaqsiyadeed, kana howl gala xarun caafimaad oo sharci darro ah oo qoto dheer oo ka hooseysa xarunta tuubada macbadka London ee kuwa raba inay kusii nagaadaan nidaamka, ama kuwa aad ugu baahan inay raadsadaan daaweyn aan laga helin qaab caadi ah. Caawinta ka timid shaqaalaha dhulka hoostiisa ee Lee (Daniel Mays) iyo cilmi baadhe dembiga lagu xukumay Anna (Carice van Houten), macaamiisha khatarta ah ee Daniel iyo kuwa aan la saadaalin karin waxay tijaabinayaan akhlaaqda ilaa xad. Laakiin haddii ay ka dhigan tahay inuu badbaadin karo qofka uu jecel yahay, dhammaantood way u qalmi doonaan.
Nagala Soo Xiriir Halkan
Telefoon: 01803 203445
(c) Dhammaan Xuquuqda Waxay Leedahay 2007 - 2020 Silent Roof Ltd.
Waxaa suuro galiyay EMF Foomka Internetka
Waad ku mahadsan tahay isdiiwaangalinta. La wadaag xiriiriyaha tixraacaaga gaarka ah si aad u hesho dhibco ku guuleysta abaalmarino ..